Ahoana ny filalaovana lalao Netflix amin'ny Android sy iOS? | la-manette.com
Ahoana ny filalaovana lalao Netflix amin'ny Android sy iOS?
22 février 2021 feh Trawl tsara tarehy
Manantena ny hanitatra ny orinasan'ny filalaovana azy, vao haingana ny Netflix dia namoaka fanangonana lalao ho an'ny mpampiasaAndroid ary iOS. Ity tolotra vaovao ity dia manaraka ny fandraisana mpiasa sy ny fahazoana, ary koa ny fitsapana any amin'ny firenena sasany.
Ny lalao, ny sasany dia mifototra amin'ny fananana ara-tsaina ny fiaraha-monina ny mivantana, dia tafiditra ao amin'ny serivisy famandrihana efa misy. Afaka miditra mora amin'ireo lalao ireo ianao amin'ny alàlan'ny fampiharana Netflix amin'ny finday na takelakao.
Tsy vitan'ny hoe maimaim-poana ho an'ny mpampiasa Netflix rehetra ireo lohateny ireo, fa tsy misy doka an-lalao na fividianana in-app. Ary koa, tsy ny rehetra amin'izy ireo no mila fifandraisana Internet mavitrika hilalao.
Amin'izao fotoana izao, ny lalao misy eo amin'ny lampihazo dia Stranger Things 3: The Game, Stranger Things: 1984, Card Blast, Shooting Hoops ary Teeter Up. Raha manana famandrihana Netflix mavitrika ianao dia afaka manandrana ny lalao avy hatrany. Ity ny fomba filalaovana lalao Netflix amin'ny finday Android / iOS na takelaka.
Dingana hilalao lalao Netflix amin'ny Android sy iOS
1. Sokafy ny Netflix ary midira amin'ny kaontinao.
1. Raha mampiasa smartphone ianao dia mandehana any amin'ny tsipika / tabilao natokana ho an'ny lalao ao amin'ny fampiharana Netflix. Raha mampiasa takelaka ianao dia azonao atao koa ny miditra amin'izany avy amin'ny menio midina Sokajy.
3. Ao amin'ny laharana / tabilao voatokana, safidio ny lalao tianao indrindra ary tsindrio ny "Get Game".
4. Avelao ny Netflix hisintona ny lalao amin'ny Play Store / App Store.
5. Raha vao tafapetraka ny lalao, safidio ny mombamomba anao Netflix (tsy voatery ho mombamomba ny ankizy izany) ary ampidiro ny kaody PIN (raha misy izany) rehefa misy bitsika.
Vakio ihany koa: Zavatra 10 tokony ho fantatra alohan'ny hanombohana ny lalao Yakuza 0
Araka ny efa noeritreretinao dia tsy mandeha tsara ao anatin'ny fampiharana Netflix ireo lalao ireo, izay miasa ho vavahadin'ireo lohateny ireo. Na izany aza, ireo lalao ireo dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny Netflix rehefa nesorina tamin'ny sehatra hafa.
Ho fanampin'izany, ny lalao dia mampiasa ho azy ny fiteny voafantina ao amin'ny kaontinao. Rehefa tsy mifanaraka ny fiteny iray dia avadika ho anglisy ny lalao.
Mandrosoa, mikasa ny hanolotra lalao isan-karazany ho an'ny karazana mpilalao rehetra ilay goavambe streaming. Araka ny filazan'i Mike Verdu, filoha lefitra miandraikitra ny fampandrosoana ny lalao, Netflix dia te "hamorona lalao ho an'ny ambaratonga rehetra amin'ny lalao sy ny karazana mpilalao rehetra, na vao manomboka izany na maharitra".
Trawl tsara tarehy
Tonian-dahatsoratra ao amin'ny la-manette.com nandritra ny roa taona mahery, Jolie dia mpankafy tsy misy fepetra ny Call of Duty sy FIFA. Ny manam-pahaizana manokana momba ny Warzone hatramin'ny nanombohany dia niandry tamim-paharetana ny hampidirana anti-cheat amin'ny lalao. Mba hifandraisana aminy: [email voaaro]
Lahatsoratra farany nataon'i Jolie Chalut (jereo ny zava-drehetra)
9 tsara indrindra rindrambaiko mpanova sary maimaim-poana - 16 Desambra 2021
Olana Wi-Fi amin'ny PlayStation 4? Toro-hevitra sy vahaolana 8 mendrika andramana - 7 Desambra 2021
Ahoana ny fandraketana ny efijery amin'ny horonan-tsary ao amin'ny Apple iPhone 12 mini - 3 Desambra 2021
Ahoana no famafana ny mombamomba ny Netflix?
Pokemon mamirapiratra Pearl: hevitra